Articles ABUU CUBEYDA BINU AL-JARRAAX Category: warka	Published on 22 August 2012	Hits: 435	Wuxuu lahaa weji furan oo qurxoon, joog iyo jamaal loo dhammeystiray. Ma uusan lahayn hilib sidaa u sii weyn, dherer iyo fudeyd xagga jirka ah ayaa intaas u sii dheereed. Way ku il-qabowsanaysay isha eegaysa xaggiisa, wehel iyo xasilooni ayuu ka helayay qofka agtiisa jooga.
Abu Cubeyda wuxuu kamid ahaa dadkii ugu horreeyey ee soo Islaamay Cabdullaahi Binu Cumar Ilaah ha raalli noqdee ayaa isagoo sifeenaya oo tilmaamaya Abuu Cubeyda wuxuu yiri “saddex qof oo ka soo jeeda qabiilka qureysh waxay noqdeen dadka kuwa ugu suubban xagga akhlaaqda, xagga xishoodkana ugu sugnaan badan, haddey kuu sheekeeyaan lagama yaabo inay been kuu sheegaan, haddaad u sheekeesana kuma beensadaan, waxayna kala yihiin Abuubakar Assiddiiq, Cusmaan Binu Caffaan iyo Abuu Cubeyda Binu Al-Jarraax”.
Ficilkiisa awgeed waxaa ku soo degtay aayad qur'aan
Markii uu Abuu Cubeyda u adkeysan waayay arrintaas, ayaa wuxuu seeftiisa kula beegsaday ninkii xaggiisa soo aadayay weliba dhufasho daran oo laba ka-kala dhigtay madaxiisa, sidiina ayuu ninkii dhulka ugu dhacay isagoo dangiigan oo weliba dhintay. Haddaba, akhristoow ha isku sii wareerin inaad ogaatid qofkaas dhintay kuu yahay. Soow horey umaanan oran, tijaabooyinkii qallafsanaa ee uu soo maray Abuu Cubeyda awgeed wuxuu dhaafay kuwii wax xisaabinayay xisaabtankooda, sidoo kale kuwa wax mala-awaala mala-awaalkooda. Waxaa dhici karta akhristow inaad aad ula yaabtid haddaad ogaatid in ninka la dilay uu yahay Cabdullaahi Binu Al-Jarraax oo ahaa Abuu Cubeyda aabihiis. Dhab ahaantii Abuu Cubeydah ma uusan dilin aabihiis, balse wuxuu dilay shirkigii iyo kufrigii ku dhex jiray aabihiis. Waxaa Abuu Cubeyda isaga sababtiis iyo arrinka aabihiis dartii ku soo degtay aayad qur’aan ah, waa aayadda ugu danbeysa ee ku jirta suuradda Al-Mujaaddala.
Wuxuu Alle (sw) ku yiri aayaddaas: “Ma helaysid qolo rumeenaysa Alle iyo maalinta aakhiro, kuwaasoo jecel cid Alle iyo Rasuulkiisa khilaafay, haba noqdeen kuwaas aabayaashooda, ubadkooda, walaalahood ama qabiilkoodaba, kuwaas (aanan jeclayn kuwa khilaafay Ilaahay iyo Rasuulkiisa) wuxuu Alle laabtooda ku qoray iimaanka, wuxuuna ku xoojiyay ruux xaggiisa ka ahaatay, wuxuuna gelinayaa Jannooyin durreereysa xaggeeda hoose webiyaal iyagoo ku waarayana jannada dhexdeeda, Ilaah wuu ka raalli noqday iyaga, iyaguna way ka raalli noqdeen, kuwaas waa xisbiga Alle, xisbiga Alle-na waa kuwa guuleystay/liibaanay”. [Dhegeyso Ayadda 22 ee Al-Mujaadalah]
“waxaa la tagay sifadii aan rabay Abuu Cubeyda”. Inuu Abuu Cubeyda dilo aabihiis ayaanan ahayn wax sidaas loola yaabo, maxaa yeelay waxay awoodda rumeyntiisa Eebbe (sw) gaartay, iyo taageerada uu ku bixinayo diintiisa iyo weliba amaanadiisa ee ummadda Nebi Muxammad meel ay u hanqal-taagto nafaf fara badan marka laga eego Eebbe (sw) agtiisa. Waxaa sheekeeyay Muxammad Binu Jacfar, wuxuuna yiri: “waxaa Rasuulka (scw) u soo wafdiyay wafdi koox kirishtaan ah, waxay ku yiraahdeen: Yaa Abal-qaasim (mid ka mid ah kunyada Nebiga s.c.w ee aan habboonayn inuu qof kale ku kunyoodo ama la baxo) waxaad noo soo dirtaa nin ka mid ah asxaabtaada oo aad raalli nooga tahay, si uu noo kala garsooro dhexdeena arrimo la xiriira hanti aan isku qabanay awgeed, haddaad tihiin jamaacada muslimiintana waxaad tihiin kuwo aan xaggeena laga raalli yahay”. Rasuulka (scw) wuxuu ku yiri “ii imaada galabta, waxaan idinku darayaa nin qawi ah ahna amiin”. Cumar Binu Khadiib ayaa markuu maqlay hadalkaas wuxuu yiri: waxaan waqti horey sii aaday salaaddii duhurka, mana jeclaanin madaxtinimo maalintaas aan ka ahayn jaceylka aan u qabay inaan noqdo ninka leh tilmaantaas iyo sifadaas uu sheegay Nebiga (scw). Markii uu na tujiyay Rasuulka (scw) salaaddii duhurka, wuxuu billaabay inuu eeg-eego xagga midigtiisa iyo bidixdiisa, annigana waxaan billaabay inaan kor ahaan u qooraansado, bal si uu ii arko Rasuulka (scw), sidii ayuu u eeg-eegayay Rasuulka (scw) asxaabta dhexdooda jeer uu markii danbe ka arkay Abuu Cubeyda Binu Al-Jarraax, kadibna wuu u yeeray, wuxuuna ku yiri: “waxaad raacdaa iyaga oo si xaq ah u kala xukmi dhexdooda waxay isku khilaafeen”. Waxaan naftayda ku iri “waxaa la tagay sifadii aan rabay Abuu Cubeyda”.
Abuu Cubeyda wuxuu raggii la socday siinayay maalin kasta mid kasta oo saxaabada ka mid ah xabbad timir ah. Haddaba, Abuu Cubeyda Binu Al-Jarraax ma ahayn oo keliya amiin, balse wuxuu amaanada ku darsaday quwad iyo ku adkeysi daran dhinaca diinta, taasina waxaan ku arki karnaa wax ka badan hal jeer. Mar waxay ahayd markii uu Rasuulka (scw) diray koox ka mid asxaabta si ay uga hortagaan safar ay lahayd qureysh, wuxuuna Rasuulka (scw) kooxdaasi amiir ama madax uga dhigay Abuu Cubeyda Binu Al-Jarraax Allaha ka raalli noqdee, wuxuuna sahay ahaan u sii siiyay oli (maqaarka neefka ariga, wax baana lagu radin jiray waagii hore) ay ku jiraan timir, maxaa yeelay ma uusan u awoodin waxaan ka ahayn intaas. Abuu Cubeyda Binu Al-Jarraax wuxuu raggii la socday siinayay maalin kasta mid kasta oo saxaabada ka mid ah xabbad timir ah, markaasuu qof weliba muudsanayay xabbaddii timirta ahayd, sida uu cunuga yariba uu u nuugo naaska hooyadii. Sidaas ayuu qof kasta sameenayay maalin kasta, isagoo xabbadaas timirta ku cabbi jiray biyo, wayna ku filnaan jirtay maalintoodaas, iyadoo aan sidaas ka fahmi karno halka ay gaarsiisan tahay rafaadka iyo dhibaatada ka soo gaaray dagaalkaas, xittaa waxaa kaloo la sheegaa inay xittaa saxaabadii markii danbe ay dani ku qasbtay inay cunaan caleemaha geedaha, gaajo awgeed.
“wuxuu Abuu Cubeyda ahaa afloowihii ugu fiicnaa dadka”. Abuubakar
Markii la soo gaaray dagaalkii maalintii Uxud, markii la jebiyay ciidamadii muslimiinta, mushrikiintiina ay billaabeen inay dhawaaqaan iyagoo leh “na tusiya Muxammad.., na tusiya Muxammad”. Waqtigaas iyada ah, wuxuu Abuu Cubeyda Binu Al-Jarraax Ilaah ha ka raalli noqdee ka mid ahaa tobankii isku soo gadaamay Rasuulka (scw) si ay uga difaacaan warmihii ay soo tuurayeen mushrikiinta. Markii ay dhammaatay dagaalkii Uxud, wuxuu Rasuulka (scw) ahaa kii la jabiyay dhooshiisa, sidoo kale waxaa la dakhray dhafoorkiisa, koorarkiisana waxaa ka gashay labo birood oo ka mid ah miqhfarkii (koofiyadaha madaxa iyo wejiga qariya ee dagaalka waqtigaas la gashan jiray). Waa dhaawac halis ah lehna xanuun badan. Waxaa xaggii Rasuulka (scw) soo aaday Abuubakar Assiddiiq Ilaah ha ka raalli noqdee, isagoo doonaya inuu ka soo siibo birihii Rasuulka ka galay kulleetagiisa.. Abuu Cubeyda Binu Al-Jarraax ayaa ku yiri Abuubakar “Ilaah ayaan kugu dhaarinayaaye inaad ii dhaafto ka soo bixinta anniga”, sidiina ayuu abuubakar ugu dhaafay.
Abuu Cubeyda wuxuu ku yiri Cumar Binu Khadaab “ma ihi ruux ka hormaraya nin uu amray Rasuulka (scw) inuu salaadda na tujiyo jeer uu Nebiga ka dhintay”. Abuu Cubeyda Binu Al-Jarraax wuxuu kala qayb galay Rasuulka (scw) dhammaad dagaalladii dhacay laga soo billaabo maalintii uu soo islaamay ilaa uu ka geeriyooday, waana sharaf aad u weyn oo uu dheer yahay qaar ka mid ah asxaabta. Maalintii loogu magac daray “SAQIIFA” ee ahayd maalintii madaxtinimada ama khilaafada loo dooranayay Abuubakar wuxuu Cumar Binu Khadaab Ilaah ka raalli noqdee ku yiri Abuu Cubeyda “fidi gacantaada si aan kuu doorto, maxaa yeelay waxaan maqlay Rasuulka (scw) oo leh Ummad kasta waxay leedahay amiin, adigana waxaad tahay ummaddan amiinkeeda”. Abuu Cubeyda wuxuu ku yiri Cumar Binu Khadaab “ma ihi ruux ka hormaraya nin uu amray Rasuulka (scw) inuu salaadda na tujiyo jeer uu Nebiga ka dhintay”.
"waxaan idiin dardaarmayaa dardaaran, oo haddii aad qaadataan aydan ka suulaynin abadkiin kheyr. Waxaad oogtaan salaadda, soomana bisha Ramadaan, saddaqadana la baxa (zakada), gutana acmaasha xajka iyo cumrada, u nasteexeeya madaxdiina, oo ha khiyaamina, yeynana idin mashquulin adduunyo, qofku haddii kun sanno oo cumri ah la siiyo, waxaa hubaal ah inuu aakhirka ku sugnaan doono halka aan hadda ku suganahay, wassalaamu caleykum waraxmatullaahi" . Abu-Cubeyda oo saarnaa sariirta sakaraadka Dardaarankii Abuu Cubeyda
Intii uu Abuu Cubeyda Binu Al-Jarraax saarnaa sariirta sakaraadka wuxuu u dardaarmay ciidankii muslimiinta ee uu isaga hoggaaminayay, wuxuuna ku yiri "waxaan idiin dardaarmayaa dardaaran, oo haddii aad qaadataan aydan ka suulaynin abadkiin kheyr. Waxaad oogtaan salaadda, soomana bisha Ramadaan, saddaqadana la baxa (zakada), gutana acmaasha xajka iyo cumrada, u nasteexeeya madaxdiina, oo ha khiyaamina, yeynana idin mashquulin adduunyo, qofku haddii kun sanno oo cumri ah la siiyo, waxaa hubaal ah inuu aakhirka ku sugnaan doono halka aan hadda ku suganahay, wassalaamu caleykum waraxmatullaahi". Dardaarankaas kadib, wuxuu Abuu Cubeyda jaleecay oo milicsaday saxaabigii jaliilka ahaa ee Mucaad Binu Jabal, wuxuuna ku yiri "Mucaadow tuji dadka". Kamaba soo wareegan intaas waxyar jeer ay ruuxdii daahirka ahayd ee Abuu Cubeyda ay u kor noqoto Allihii sarreeyay, sidaasna ayuu ku dhintay.